​फेसबुकले चिनियाँ मोबाइल कम्पनीसँग डाटा शेयर गरेको खुलासा
न्यूजलय शुक्रबार २५, जेठ २०७५
काठमाडौं । फेसबुकले वावेसहित कम्तीमा चारवटा चिनियाँ मोबाइल कम्पनीसँग फेसबुक प्रयोगकर्ताका डाटा शेयर गरेको खुलासा भएको छ ।
प्रयोगकर्ताका डाटाहरु चिनिया कम्पनी वावे, लेनोभो, ओप्पो र टिसिएलसँग शेयर गरेको फेसबुकले स्वीकारेको छ ।
न्युयोर्क टाइम्सले फेसबुकद्वारा कम्तीमा ६० वटा....
युगाण्डामा किन लगाइयो फेसबुक चलाउँदा कर तिर्नुपर्ने नियम ?
न्यूजलय मङ्गलबार २२, जेठ २०७५
काठमाडौं । युगाण्डाको संसदले फेसबुक लगायतका सोसल मिडियाको प्रयोग गर्ने नागरिकमाथि कर लगाउने कानून बनाएको छ ।
कानून अनुसार फेसबुक, ह्वाट्सएप, भाइबर तथा ट्विटर जस्ता सोसल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने मानिसहरुले हरेक दिन झण्डै पाँच रुपैयाँ बराबरको रकम कर तिर्नुपर्ने छ ।
​टेलिकमले दियो चार जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भूकम्पबाट अति प्रभावित ४ जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ । टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार चार जिल्लाको ६ सय ७५ स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको हो ।
टेलिकमले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट र रसुवाका सार्वजनिक....
​अमेरिकी किशोरकिशोरीमा फेसबुक मोह घट्दै
न्यूजलय आइतबार २०, जेठ २०७५
बिबिसि । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र अमेरिकी किशोरकिशोरीबीच पछिल्लो समय दूरी बढ्दै गएको देखिएको छ । उनीहरूमाझ अरू माध्यमहरू लोकप्रिय हुँदै गएका छन् ।
द प्यू रिसर्च सेन्टरका अनुसार १३ देखि १७ वर्षका अमेरिकी किशोरकिशोरीमध्ये ५१ प्रतिशतले मात्रै फेसबुक प्रयोग गरिरहेको पाइएको....
​इन्टरनेटको पनि मूल्य बढ्ने
न्यूजलय शनिबार १९, जेठ २०७५
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान व्याएपछि इन्टरनेट शुल्क बढ्ने भएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
​टेलिकमको मिस्डकल एलर्ट सेवा पुनः संचालन
काठमाडौं । कसैले तपाईलाई फोन गर्यो, तर लागेन भने तपाइको नम्बरमा कसैले फोन गरेको थियो भनेर नोटिफिकेसन आउँछ । यो सेवा केही समयदेखि बन्द थियो । तर नेपाल टेलिकमले यो सेवा फेरी सुरु गर्ने भएको छ ।
मिस्ड कल एलर्ट सेवा जेठ....
​यूरोपेली सांसदसँग फेसबुक संस्थापकले माफी मागे
न्यूजलय बुधबार ०९, जेठ २०७५
काठमाडौं । फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले यूरोपेली सांसदसँग माफी मागेका छन् । फेसबुकमा आउने फेक न्यूज र क्याम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरणप्रति जुकरबर्गले माफी मागेका हुन् ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले आफ्नो राजनीतिक अभियानका लागि झण्डै ९ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको गोप्य डाटा चोरेको आरोप लागेको थियो....
​धेरै फेसबुक चलाउने व्यक्ति, धेरै दुःखी हुने !
न्यूजलय आइतबार ०६, जेठ २०७५
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा धेरै समय बिताउने बालबालिका खुशी नहुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
बेलायतको शेफिल्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रीहरूको एक टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार फेसबूक, स्न्यापच्याट, ह्वाट्सयाप र इन्स्टाग्राममा बालबालिकाले जति बढी समय च्याट गरेर बिताउँछन्, उति कम उनीहरू विद्यालयको काम....
​फेसबुकले बन्द गर्यो २ सय एप्स
न्यूजलय शनिबार ०५, जेठ २०७५
फेसबुकले २ सय वटा एप बन्द गरेको छ । प्रयोगकर्ताका डाटामाथि अनधिकृत पहुँच स्थापित गरी दुरुपयोग गर्ने एपहरुमाथि कारवाही गर्ने कार्य सुरु गरेको फेसबुकले पहिलो चरणमा फेसबुकमा क्रियाशील एपलाई निलम्बन गरेको हो ।
फेसबुकले निलम्बन गरिएका एपहरुको नाम भने खुलाएको छैन ।....
​फेसबुकले ल्यायो तीन नयाँ फिचर्स, अडियो पोष्ट गर्न सकिने
न्यूजलय बिहीबार ०३, जेठ २०७५
काठमाडौं । फेसबुकले क्लाउड स्टोरेज, भ्वाइस पोष्ट, स्टोरी आर्काइभ गरी थप तीन नयाँ फिचर्स सार्वजनिक गरेको छ ।
यी नयाँ फिचर्समार्फत प्रयोगकर्ताले फेसबुक क्लाउडमा फोटो र भिडियो सेभ गर्न सक्नेछन् ।
फेसबुकले ल्याएको अर्को फिचरमा भ्वाइस (अडियो) पोष्ट गर्न....